चन्द्रागिरी नगरपालिकामा एमालेबाट को–को छन् अाकांक्षी ? « Deshko News
चन्द्रागिरी नगरपालिकामा एमालेबाट को–को छन् अाकांक्षी ?
काठमाडाैं, चैत्र २७
आउदो बैशाख ३१ गते सरकारले स्थानिय चुनावको मिति घोषणा गरे पछि स्थानिय तहमा चुनाबि चहलपहल तिब्र बन्दैछ भने झन्डै दुई दशक पछी हुन लागेको यस चुनावमा आकांक्षी उमेदबार पनि प्रशस्तै मैदानमा देखिदै छन् ।
प्रदेश नं ३ कै महत्वपूर्ण मानिएको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा भावि मेयरको लागि एमालेबाट झन्डै आधा दर्जनको हाराहारीमा नेताहरुको दौडधुप सुरु भएकाे छ ।
४४ हजार हाराहारीमा मतदाता रहेको यस नगरपालिका १५ वडामा बाँडिएको छ । कलंकी देखी पश्चिमका साबिक ११ वटा गाबिस मिलेर बनेको यस नगरपालिकाको स्थानीय चुनाबको पछिल्लो परिणाम हेर्ने हो भने एमालेको पल्ला भारी छ ।
तर लामो समय देखि स्थानीय चुनाव नहुनु, संसदीय चुनाबमा कंग्रेसको जित र स्वयम् प्रधानमन्त्रीको चुनाबि क्षेत्रले गर्दा चाँही भाबी स्थानीय चुनाव एमालेको लागि त्यति सजिलो नहोला ।
तर जति सजिलो एमालेलाई छ त्यति गाह्रो अन्य दललाई निश्चित छ, यदि एमालेबाट जनपक्षिय उमेदबार खडा भएको अवस्थामा .
चन्द्रागिरीमा एमालेबाट को त भन्ने बहस यतिबेला उत्कर्षमा छ । एमालेबाट चन्द्रागिरीको भाबि मेयरमा धेरै सुनिएको नाम हो प्रल्हाद कार्की । अन्यमा हरिसरण थापा, गोपिचन्द्र कार्की, रमा आलेमगर, दिपक पनेरु, भाइ कृष्ण बलामी लगायत रहेका छन् ।
नगर कमिटी संयोजक रहेका प्रलाहद कार्कीको दाबी अन्य उमेदबारको तुलनामा अलि बढी देखिएको छ । दुई दुई पटक गाबिस अध्यक्षको सफल नेतृत्व गरिसकेका कार्की जनपक्षिय उमेदबार हुन् भने सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको साबिक गाबिस अध्यक्ष रहेको कारणले पनि चन्द्रागिरी नगरपालिकामा कार्कीको दाबी स्वतः देखिन्छ ।